तौल हराउने - Cmoapi
CMOAPI शीर्ष गुणस्तर Cetilistat पाउडर र Orlistat मध्यवर्ती आपूर्ति गर्ने एक औषधि निर्माता हो, महिना क्षमता 3100kg सम्म हुन सक्छ, र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (ISO19001) र पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली (14001) को सबैभन्दा व्यापक स्वामित्व छ।
वजन घटाउने उत्पादनहरू किन्नुहोस्
कहाँ Lorcaserin र यसको मध्यवर्ती खरीद गर्ने?
तपाईं वजन घटाउने गोलीहरू अनलाइन स्टोरहरूमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईंको लक्ष्य मोटाईको कारण अतिरिक्त पाउन्ड गुमाउनुपर्दछ, तपाईं वजन घटाउने गोलीहरू （ओर्लिस्ट्याट / सेटिलिस्ट्याट online अनलाइन बिक्रीको लागि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईंलाई एफडीए द्वारा कडा मार्गनिर्देशनहरूको परिणामका रूपमा पर्चेको आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईं वजन घटाउने औषधीहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले शुद्ध उत्पादनहरूको मान्य आपूर्तिको लागि CMOAPI मार्फत जाँच गर्नुपर्छ। हाम्रो यौगिकहरुमा गुणवत्ता आश्वासन आएको छ।
Orlistat काम गर्दछ यदि तपाईं बोसो खानुहुन्न?
यदि तपाइँको कुनै खानामा कुनै बोसो छैन भने, वा तपाइँले खाना खानुभयो भने, तपाइँलाई orlistat को एक खुराक लिन आवश्यक छैन।
म एक दिन कतिवटा orlistat लिन्छु?
ओर्लिस्टाट सामान्यतया प्रत्येक मुख्य खानाको साथ प्रति दिन times पटक लिइन्छ जसले केही फ्याट समावेश गर्दछ (त्यो खानाको लागि क्यालोरीको %०% भन्दा बढि)। तपाईं या त खाना खान संग वा खाना पछि १ घण्टा सम्म औषधि लिन सक्नुहुन्छ।
के तपाईं ओर्लिस्ट्याट खाँदा फ्याट आउट गर्न सक्नुहुन्छ?
ओलिलिस्टेट लेप्यासेको काम रोक्दछ। जब तपाईं खानाको साथ लागूपदार्थ लिनुहुन्छ, तपाईंले सेवन गरेको फ्याटको २ percent प्रतिशत टुक्रिदैन र आन्द्रा चालहरू मार्फत हटाइन्छ।
के orlistat का साइड इफेक्टहरू छन्?
ओर्लिस्टाटको सामान्य रूपमा रिपोर्ट गरिएको साइड इफेक्टहरूमा: आंत्र तुरुन्तता, लगातार आंत्र आन्दोलन, तेल निकासी, तेल गुदा चुहावट, स्टीओटरिया, र स्रावको साथ पेट फूलन।
के तपाईं एकैचोटि २ ओर्लिस्ट्याट लिन सक्नुहुन्छ?
अर्लिस्ट्याटले मात्र काम गर्दछ जब तपाईंले खानु हुने फ्याटहरू हुन्छन्, त्यसैले यदि तपाईंले खाना याद गर्नुभयो वा यदि तपाईं फ्याट-फ्रि भएको खाना खानुहुन्छ भने ओरलिस्ट्याटको डोज नखानुहोस्। यदि तपाईं एक खुराक लिन बिर्सनुभयो भने, चिन्ता नलिनुहोस्; सामान्य रूपमा तपाईंको अर्को खानाको साथ क्याप्सूल लिनुहोस्। एक बिर्सिएको खुराक को लागी एक साथ दुई खुराक नलगाउनुहोस्।
कुन राम्रो orlistat वा Xenical छ?
Orlistat र Xenical बीचको भिन्नता भनेको orlistat औषधीको जेनेरिक संस्करण हो, जबकि Xenical ब्रान्ड गरिएको छ। यसको मतलब Xenical Orlistat भन्दा महँगो छ र एक वजन कम ट्याब्लेट को रूप मा प्रसिद्ध छ। Xenical लाई orlistat जत्तिकै उस्तै लिनु पर्छ।
तपाईं orlistat मा पिउन सक्नुहुन्छ?
Orlistat रक्सीको साथ कुराकानी गर्दैन, त्यसैले यो Orlistat लिँदा रक्सी पिउन सुरक्षित हुन्छ। यद्यपि रक्सीमा क्यालोरी बढी हुन्छ। नतिजा स्वरूप, ओर्लिस्टाट लिँदा रक्सी पिउँदा तपाईंको वजन घटाउने यात्रामा बाधा पुग्न सक्छ। कसरी अरू ओर्लिस्टाटलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हाम्रो ओर्लिस्ट्याट आहारको बारेमा थप सल्लाहका लागि
के orlistat प्रजनन क्षमतामा असर गर्छ?
ओर्लिस्ट्याट समूहमा, improvement महिनाको अन्त्यमा लिपिड प्रोफाइलमा उल्लेखनीय सुधार देखियो। अवधारणा दरहरू क्रमशः %०% र १.3..40% र 16.7% ओर्लिस्ट्याट, मेटफर्मिन समूह र कन्ट्रोल समूहमा थिए (पी - ०.०3.3))। ओजनुलेसनको राम्रो पूर्वानुमानकर्ताको रूपमा राम्रो संवेदनशीलताको साथ संवेदनशीलताको साथ वजन घटाउनु पर्‍यो।
के म दिनमा एक पटक orlistat लिन सक्छु?
सामान्य खुराक एक क्याप्सूल हो - १२० मिलीग्राम, प्रत्येक खानाको साथ दिनमा तीन पटक। जे होस्, यदि तपाईंले खानामा फ्याट छैन वा यदि तपाईंले खाना याद गर्नुभयो भने तपाईंले एक लिनु आवश्यक पर्दैन।
के orlistat ले कलेजो बिग्रन सक्छ?
अल्ली दुर्लभ अवस्थामा गम्भीर कलेजोको चोटपटकसँग जोडिएको छ, यद्यपि यो अधिकांशतः पर्चा-शक्ति खुराक लिनेहरुमा हुन्छ (जेनेिकल)। Alli लिन रोक्नुहोस् र तुरून्त डाक्टरलाई कल गर्नुहोस् यदि तपाईले कलेजो बिग्रने सम्भावनाको कुनै पनि सम्भावित लक्षण देखा पर्यो भने
के orlistat ले रक्तचाप बढाउँदछ?
ओर्लिस्ट्याटले क्लिनिक अर्थपूर्ण वजन घटाउन प्रोत्साहित गर्दछ जुन रक्तचाप र मुटुको दरमा उल्लेखनीय कटौतीको साथ सम्बन्धित छ, र त्यसैले अधिक वजन र मोटो बिरामीहरूमा उच्च रक्तचापको व्यवस्थापनमा भूमिका निभाउन सक्छ।
के orlistat ले मृगौली समस्या निम्त्याउन सक्छ?
ओर्लिस्टाट ग्यास्ट्रिक र अग्नाशययुक्त लाइपसेजको अवरोधकर्ता हो जसले वजन बढाउनको बृद्धि र रखरखावमा प्रमाणित प्रभावकारिताको साथ छ। यद्यपि यसको प्रयोग कष्टकर तर सीमित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट द्वारा सीमित गरिएको छ, यो हालसाल तीव्र गुर्दा चोट (AKI) संग सम्बन्धित छ।
के orlistat लत छ?
ओर्लिस्टाट एक अग्नाशययुक्त लिपेस अवरोधक हो र पाचन पथमा फ्याट शोषण रोक्दछ। किनकि यसले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई असर गर्दैन, orlistat मा लत गुण हुन सक्दैन।
के Orlistat एफडीए अनुमोदित छ?
Xenical (orlistat १२०mg) लाई १ 120 1999। मा मोटापा व्यवस्थापन को लागी एक कम पर्दा कोलोरिक आहारको साथ संयोजनको रुपमा एक नुस्खा उत्पादन को रुपमा अनुमोदन गरिएको थियो, र वजन को पहिले वजन को कमी पछि जोखिम कम गर्न को लागी।
तपाईं कसरी orlistat १२० मिलीग्राम लिनुहुन्छ?
Orlistat को सामान्य खुराक एक १२० मिलीग्राम क्याप्सूल हो प्रत्येक दिन तीन मुख्य भोजनको साथ। यो तुरुन्तै लिन सकिन्छ, खानाको समयमा वा खाना पछि एक घण्टा सम्म। क्याप्सूल पानीले निल्नु पर्छ।
के orlistat ले वजन बढाउन सक्छ?
ओर्लिस्ट्याटको परिणामका रूपमा अधिक वजन घटाउने औषधि लिने पहिलो छ महिना भित्र हुन्छ। यदि तपाईं ओर्लिस्टेटलाई वजन घटाउन प्रयोग गर्न रोक्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले स्वस्थ खाना खानु पर्छ र नियमित व्यायाम गर्नु पर्छ। यद्यपि तपाईले यसपश्चात केहि वजन बढावा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
ओर्लिस्ट्याटको साथ तपाईं कति छिटो वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ?
अर्लिस्ट्याट (ब्रान्ड नाम: alli) एक एफडीए-अनुमोदित ओटीसी औषधि हो जसले अत्यधिक तौल वयस्कहरूलाई वजन घटाउन मद्दत गर्दछ। अर्लिस्ट्याटले भोजनको समयमा खाए पछि फ्याट शरीरमा समाहित हुनबाट रोक्दछ। लगभग to देखि १० पाउन्ड ओर्लिस्ट्याट प्रयोगको पहिलो months महिनाको अवधिमा हराउन सक्छ।
Alli काम गर्न सुरु गर्न कति समय लाग्छ?
Alli® क्याप्सुल लिइसके पछि मैले परिणामहरू हेर्ने अपेक्षा गर्नु पर्छ? यदि तपाईं घटेको क्यालोरी, कम फ्याटयुक्त आहारको पालना गर्नुहुन्छ, नियमित शारीरिक गतिविधि पाउनुहोस्, र निर्देशनको रूपमा एली क्याप्सल्स लिनुभयो भने, तपाईंले पहिला दुई हप्तामा परिणाम देख्न सक्नुहुनेछ। प्राय: वजन घटाउने पहिलो छ महिना भित्र देखा पर्दछ।
के orlistat भूक दबाउँछ?
ओर्लिस्ट्याट (Xenical) एक औषधि हो जुन तपाईंको जीपीले तोक्छ। यो वजन घटाउन सहयोग गर्न विकसित गरिएको छ। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि ओर्लिस्ट्याटको प्रयोग गरेर, स्वस्थ आहार र व्यायामसँगै, त्यहाँ वजन बढेको छ। यसले डाईट वा व्यायाम प्रतिस्थापन गर्दैन र यसले तपाईंको भोकलाई दबाउदैन।
के orlistat वास्तवमा काम गर्दछ?
अध्ययनहरूले देखाए कि औसतमा, orlistat, अधिक वजन घटाउने आहार र व्यायाम, एक वजन कम गर्ने आहार र व्यायाम मात्र भन्दा अधिक वजन घटाउँछ। केही व्यक्तिहरू orlistat को सहायताले छ महिना भित्रमा 10% वा धेरै आफ्नो शरीरको वजन घटाउँछन्। अरूमा यो कम प्रभावकारी हुन्छ।
के ओर्लिस्टेटले गर्दा अग्नाशयशोथ हुन सक्छ?
निष्कर्ष हाम्रो रिपोर्टले सुझाव दिन्छ कि orlistat ले केहि बिरामीहरुमा औषधि प्रेरित तीव्र पनक्रियाटाइटिस ट्रिगर गर्न सक्दछ। अर्लिस्ट्याट सुरु हुने बित्तिकै पेटमा दुखाइ प्रस्तुत गर्ने बिरामीहरूको लागि, पेन्क्रियाटाइटिसको निदान विचार गर्नुपर्नेछ। हामी अग्नाशयी चोटको जोखिममा बिरामीहरूमा ओर्लिस्टेटको सतर्क प्रयोगको पनि सिफारिस गर्छौं।
Orlistat लिनको लागि उत्तम समय के हो?
Orlistat एक क्याप्सूल र एक nonprescription क्याप्सुल को रूप मा आउँछ मुख द्वारा लिन। यो सामान्यतया प्रत्येक मुख्य खानाको साथ दिनमा तीन पटक लिन्छ जुन बोसो समावेश गर्दछ। खानाको क्रममा orlistat लिनुहोस् वा खाना पछि १ घण्टा सम्म। यदि खाना हराएको छ वा बोसो छैन भने, तपाईं आफ्नो खुराक छोड्न सक्नुहुन्छ।
एक महिनामा तपाईको मोटोपन यदि तपाईले कति वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ?
यसको मतलब, औसतमा, जुन प्रति महिना to देखि p पाउंड वजन घटाउनु स्वस्थ लक्ष्य हो। केवल किनभने यो अधिक धेरै गुमाउन सम्भव छ, कम्तिमा एक आहार को शुरुआती महिनाहरु मा, यो स्वस्थ छैन वा वजन लामो अवधिमा बन्द रहनेछ भन्ने होइन।
ओओलिस्ट्याट लिँदा किन पप सुन्तलाको तेल छ?
तेल पानी भन्दा कम घन छ, यो मल त्यागिन्छ पानी माथि बसेको एक सुन्तला तेल को रूप मा शौचालय मा देखा पर्नेछ। केयरिरियाको गन्धलाई केहि व्यक्तिले कडा खनिज तेलको रूपमा वर्णन गर्न सक्दछन्। कहिलेकाँही, एक व्यक्ति तेलको साथमा मल पनि पास गर्न सक्छ।
Cetilistat के हो
Cetilistat, Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat ब्रान्ड नामबाट पनि चिनिन्छ नयाँ वजन वजन घटाउने औषधि हो।
हामीलाई किन सेटिलिस्ट्याट चाहिन्छ?
मोटापा विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा प्रचलित पोषण विकार हो। सबैले व्यायाम र सफा खानका साथ नतिजा याद गर्न सक्दैनन्; यसैले मोटोपनासँग लड्न Cetilistat को आवश्यकता हुन सक्छ।
कसरी Cetilistat काम गर्दछ?
Cetilistat ब्रेकडाउन र फ्याट को अवशोषण अवरुद्ध द्वारा काम गर्दछ। यसले पनक्रिएटिक लिपेसको गठनको रोकथामको माध्यमबाट गर्छ जसको कार्य आन्द्रामा ट्राइग्लिसेराइडहरू भत्काउनु हो। एक पटक ट्राइग्लिसराइड्स शरीरमा फ्याट्टी एसिडको रूपमा अवशोषित गर्न सकिँदैन, तिनीहरू उत्सर्जन भोग्छन्। फलस्वरूप, त्यहाँ कम ऊर्जाको मात्रा हुन्छ जसले तौल घटाउँछ।
Cetilistat लाभ र वजन घटाउनु
१. तपाईले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्न, स्वस्थ बीएमआई कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
२. छोटो समयमा परिणाम प्रदान गर्दछ, सेटिलिस्ट्याटले तपाइँलाई त्यो बाह्र हप्ता भित्र बिकीनी शरीर दिन्छ।
कसरी Cetilistat प्रयोग गर्ने
सामान्यतया, सेटिलिस्ट्याट पाउडर m०mg क्याप्सुलको रूपमा बेचिन्छ जुन मौखिक रूपमा लिन्छ। केही व्यक्तिहरूले यसलाई भोजनको समयमा लिने मनपर्दछ, तर तपाईंले भोजनको समयभन्दा एक घण्टाभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
के Cetilistat साँच्चै काम गर्दछ?
सेटिलीस्टेट एक छोटो अवधिको औषधि पनि हो र बाँकी जीवनको लागि तौल नियन्त्रण गर्न उत्तम नहुन सक्छ। यदि यो धेरै लामो समयको लागि प्रयोग गरिएको छ भने यसले लतका साथै गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल मुद्दाहरूलाई पनि निम्त्याउन सक्छ।
अर्टिलिस्ट जस्तो अन्य वजन घटाउने औषधिहरूको तुलनामा सेटिलिस्टेटलाई अझ राम्रो तरीकाले सहन सकिन्छ।
को Cetilistat प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईको बीएमआई २ than भन्दा बढि हो, र तपाई मोटापा सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या जस्तै पीडित हुनुहुन्छ उच्च रक्तचाप र मधुमेह।
अधिकांश Cetilistat साइड इफेक्टहरू पेट्रो र पाचन मार्ग सम्बन्धित छन्।
भिटामिन ई र डीको स्तरमा कटौती, मल की असंयमता, शौच तात्कालिकता, गुदाशय डिस्चार्ज ， फ्याट मलहरू ， तैल मल ect।
के हुन्छ यदि सेटिलिस्ट्याटको मिस डोज?
यदि तपाईंले एक खुराक हराउनुभएको छ भने, त्यहाँ दुई कुरा तपाईंले विचार गर्नुपर्ने हो; तपाइँ कति ढिलो हुनुहुन्छ र जब तपाइँको अर्को तालिका हुन्छ। यदि तपाईंलाई याद छ कि तपाईंले भर्खर एउटा खुराक हराउनु भएको छ भने, नोटिस गरेपछि यसलाई लिनुहोस्।
यदि तपाईंको अर्को तालिका धेरै नजिक छ भने, हराएको सेटिलिस्ट्याट खुराक छोड्नुहोस् र तपाईंको नियमित खुराक तालिका पुनःसुरु गर्नुहोस्। छुटेको खुराकको लागि कहिले पनि अतिरिक्त खुराक प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यसले केवल ओभरडोज मात्र निम्त्याउँछ। यदि तपाईंलाई सम्झना छ जस्तो लाग्छ कहिले तपाईंको ड्रग्स लिने काम भइरहेको छ, तपाईं सँधै अलार्म सेट गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको साथीहरू वा परिवारका सदस्यहरू मध्ये एकलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
के भिन्नता छ cetilistat र orlistat？
ओर्लिस्टाटको साथ उपचार पनि जटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रतिकूल घटनाहरू (AEs) को संख्यासँग सम्बन्धित छ जुन बिरामीहरूमा सिफारिश गरिएको कम-फ्याट आहारको पालना गर्दैन। सेटिलिस्टेट अग्नाशय र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइपासेजको एक अवरोधक हो, र रासायनिक रूपमा ओर्लिस्टेट भन्दा भिन्न छ।